STAINLESS STEEL CHAIN ​​Manufacturer, mpamatsy, Factory - reducer, reducers kankana, boaty kankana, boaty planeta planeta, reducers hafainganana, variatera, kojakoja helikaly, girety sprial bevel, boaty fiompiana, fakan-traktera, giratra kamiao, boaty kankana
Ny fanamafisana ny Viking Chains Group ho
Connexus Industries dia namela ny fitohizan'ny VC Brand of Steel Chains. Ny VC Brand dia milaza fa ny dingan'ny famokarana tena tsara, ary ny serivisy lava isan'andro. Ity marika mahomby ity dia ahitana ny manaraka:
? Rivet amin'ny lalao famenoana gazety
? Lavaka sidebar mifanila
? Fitaovana avo lenta avo lenta sy fitsaboana hafanana
? Ny famafazana tariby amin'ny any ivelany dia manala
fanelingelenana amin'ny sprockets
? Lavaka mifanila amin'ny "True-Fit"
? Manala ny barika tsy misy fetrany
“Loza mialoha ny fotoana”
SAFITRA FITSIPIKA ROSY WELDED
? Fantsom-pahasalamana voadinika tanteraka
? Rivet mifanentana amin'ny gazety
? Fitaovana tsara kalitao avo kokoa sy fitsaboana hafanana
SAFIDY INDRINDRA NY ROA, SAFIDY SCANNING, FLIGHT, SPROCKETS, SY BEDPLATE
? Namboarina manokana hiatrehana ny fampiharana haingam-pandeha avo lenta
? Mpitondra indostrialy mandritra ny 25 miampy taona
? Vahaolana manokana
SAFIDY MILLA GAME
? Natao ho an'ny fisian'ny fanohanana maharitra amin'ny fampiharana Sugar Mill
? Hafanana voatsabo hafanana Safidy vy, Chrome mafy azo alaina
? Firaikitra mahazatra sy mahazatra
SAFIDY MANOKANA HO AN'NY MARKET REHETRA
I'Anco Cast vy vy sy hadfield manganese vy fikosoham-bary dia natao ho an'ny asa fanompoana mafy indrindra amin'ny sehatry ny fanodinana hazo ankehitriny. Natao hifehezana ny fiakanjoana tafahoatra, ny enta-mavesatra be izy ireo ary ny fiatraikany mahery. Ny fahafaha-manao kofehy mifamatotra amin'ny rohy dia manafoana ny vintana rehetra amin'ny famoronana faritra misy ny hafanana amin'ny alàlan'ny welding; Na izany aza, ny fitaovana dia mora azo averina mamela ny fotoana famerenana haingana ho an'ny fametahana manokana. Ny rohy mpandray anjara anay rehetra dia nijanona tamin'ny lohany sy rivet izay miaro amin'ny fitafiana amin'ny sisiny. Izany dia mamela antsika handraraka ireo rohy miaraka amin'ireo fizarana hazo fijaliana mavesatra manampy ny tanjaka amin'ny ankapobeny amin'ny rojo miaraka amina famolavolana velarana lehibe kokoa hizarana ny enta-mavesatra amin'ny faritra lehibe kokoa izay mampihena ny akanjo eo amin'ny bara ilany.